iPhone 4 Li-ion Battery Kuchinja ne 0 muyendo China Manufacturer
Home > Products > iPhone Battery > iPhone 4 Battery > iPhone 4 Li-ion Battery Kuchinja ne 0 muyendo
Muenzaniso Nha.: iPhone 4
Sfekitari yedu inyanzvi inogadzira iPhone bateri, yakafanana neyakakosha simba uye pashure pemakore 500 mararamiro eupenyu nguva inoramba iine 80% yakakwana. Kana mutengi wako akawana bheteri ye iPhone ikatsiviwa, iva nechokwadi chokuti iyo ichokwadi iPhone 4 bheteri ine simba rakakwirira. Mune mamwe mazwi, gara kure nemabhatiriyo anoshandiswa paIndaneti kutengesa - pane 'chikonzero chakanaka zvisingadhura. Asi isu tiri iPhone Battery factory uye kwete 12 mwedzi warranty chete, asi zvakare ivai nechokwadi chekuti mabheti ose apfuura kupererwa kwekuchengetedzwa kwehutano asati atumirwa. Bhabheri hupenyu muna 500-800 nguva, zvichiri kuchengeta 80% simba shure kwe 500 nguva. isu takabatana nemasitoreji ekugadzirisa foni mushure mekutsvaga, kutengesa foni accessories accessories uye online web shop. Kudzorera bheteri ye iPhone 4, yakakodzera purodi ye APN: 616-0512, 616-00513, 616-0520, 616-0521. Haikwanisi kukodzera iPhone 4S. Iyi itsva iPhone battery pack, tinokumbira kubvunza professoional kugadzirisa doro kunobatsira kuungana. Zvishandisi zvisina kubatanidzwa kana zvichidikanwa taura nesu.